ukudla okumnandi abathandwa zonke, kodwa uma ukudla yenzeka kwakha isimo esihle, nokukhanya omuhle futhi azihlanganise nabantu abahle, bese kuba ukudla kubonakala ukunambitha nengxenye kangcono. Vele ukuze ukwazi ukuchitha isikhathi sakho, uma ukhetha "Bar" on Bauman. Lena indawo ethokomele kakhulu ezokwenza kubonakale ekhaya cishe bomdabu. Bekela eceleni amazwi xaxa kanye nje ugxumela umoya bendabuko pub IsiZulu nge elithambile zakudala ingaphakathi design futhi izibani design. Zonke imithetho in the best!
Ubani ongathanda lapha
Uyathanda uphumule? Nethezeka phakathi induduzo okunethezeka? Noma mhlawumbe ungathanda umculo okuhle futhi smiling abantu abazimisele friendly ngakuwena? Khona-ke beze "Bar" on Bauman. Isibhakabhaka kuyinto Classic nenduduzo ngamanani ezingabizi. Ngaphesheya inhloko-dolobha yombuso lenethiwekhi imigoqo, kodwa ngalinye lizizwa uhlobo uqasha. Lapha ungakwazi ukusebenzisa ukuze uthole efudumele ngosuku abandayo nge inkomishi yetiye, uphuze ubhiya nabangani, ukuqhuba ibhizinisi noma nje yokudla kusihlwa off. Lapha okuhamba phambili kwe-onokuthula, ozothile, kodwa ngesikhathi esifanayo ntofontofo. Asikho isidingo sibe namahloni, futhi ngeke akwenze ube namahloni enye, uma uvakashela "Bar" on Bauman. Le ndawo kungenzeka kalula yokuba ube ikhaya lesintu-dock efudumele noma indawo yakho siqu, lapho uzohamba semhlangano lovely kwalezo zinxenye aqondwa kuwe kuphela. Wozani "Bar" on Bauman ujabulele konke lapha.
ibha ingaphakathi yakhelwe isitayela British ngokugcizelela ezinye indlela Sherlock Holmes. Konke lapha ngokwezinga ngokuqinile futhi conservatively. Ifenisha oki. imibala abaningi kufudumele umhlobiso nensada izakhi okuhlobisa, yakhelwe umbala wesikimu efanayo. Insiza kunemibandela ku fuktsionalnye ngokwahlukana zone. Omunye ungacabanga ukuthi kukhona eningi emadokodweni yangasese, okuyinto kuzosiza iqembu liye phambili naye isikhathi eside, ukudla ndawonye athande ukubukwa. Udlala kancane umculo ithulisiwe, okuyinto kungaphazamisi ubumfihlo kanye nokuxhumana. Kusukela ekamelweni ezivamile izindawo kungukuthi ahlukaniswe ngokuphelele, ukuze wonke izithameli abasondelene. Loku kuhlukile kwezinye "Bar" on Bauman. Izithombe kusuka ephathini egcwele abantu abaningi, kodwa cishe safike bajwayelane nomunye, okuyinto ikakhulu uchaza isimo endaweni.
Kanjani ukuze ufike lapha
Wozani "Bar" on Bauman! Ikheli isikhungo silula - Ladoga emgwaqweni, indlu 2. Thina ukubukela emidlalweni apheke Steak okumnandi! By the way, inyama - lena ikhadi lebhizinisi yethu. Futhi inyama bekhonza ubhiya real, ne nqampuna umhlabeleli kuphela. Ukusungulwa unikeza anhlobonhlobo besizulu, kusukela zakudala "Guinness" kuya ewubuciko "Hobgoblin". Lesi isici esibalulekile saleso ezinkantini British kanye Irish. Indawo yokudlela on Bauman - hhayi kuphela e -Moscow. Ibha ivuliwe iphuzu Pervomayskaya, voykovskoy futhi Belarusian. Lokho, ungakhetha indawo okungukuthi eduze nasekhaya, okuyinto ebaluleke ikakhulu kulabo abasebenza ukuqoqa izinkampani ezinkulu enobungane.
Ubani lapha akawuthandi
Ngakho, ubani akudingeki uze lapha? Okokuqala, i-okhuthele party-goers abadinga dancing uze uphonsa futhi amaqembu kuze kube solwandle lwamaFilisti utshwala ngezinga esikalini off. "Bar" on Bauman, ikheli esiqondile okuyinto cishe njalo Muscovite uyazi, edonsela abathandi bayanda ukuphumula ukhululekile futhi ukudla okumnandi. Isibhakabhaka of England ngoludala futhi umoya inkululeko abathanda-Ireland. Lapha ungakwazi ebiyelwe ngokuphepha off umsindo muzi befuna, uphumule epholile ejabulisayo. umculo wangemuva Khanyisa kukusiza ukuba uphumule, futhi imenyu yasekuqaleni kwanelisa gourmet ezingezwakali kakhulu. Ibha banga kungase kusimangaze ngisho izazi isiphuzo. Lapha aphethwe njalo sabelane emnandi futhi kukhona esivulekile Izipesheli. yokupaka kuqashelwe likhululekile, futhi abadala kanye nezingane bahlala ukuzijabulisa.
Uma siya bar ke kuqala kukho konke sinesithakazelo kwesikwenzayo imenyu. Yini enikeza sakusihlwa "Bar" on Bauman? Tihlatiywa tiya ngazwilinye umbono wokuthi ukudla lapha esiphundu. Kunezinhlobo ezintathu izinhlobonhlobo isaladi "uKhesari", isaladi zaseSicily isaladi nge i-arugula. Ukuze ukusola kungathatha ushizi ngoqwembe noma Zander Heh. Ukuze ubhiya uphelele nge inkukhu quesadilla noma Burger ezinkampani nge okuthosiwe. Ngosuku abandayo, ungakwazi ukuxoxa kule isobho nge ukhilimu omuncu noma ukhilimu-ukujabulisa isobho esiswini salmon. ukudla Zezıhlabane zihlukene futhi mnandi. Uyabukeka emehlweni yokubeka wewundlu kanye namanzi yengulube iqupha, kanye Ongoti ekhaya yokupheka Ziphathe amadombolo nge yenkomo. Fish ukukhetha ehloniphekile. Ukuze ubhiya kungathatha aphele, kodwa Dorado kudinga iziphuzo enkulu kuphela. Ukuze Hlobisa ungathatha iklabishi iyisitshulu e ukhilimu nelayisi elimnandi. iwayini Good ayatholakala nge ingilazi noma ibhodlela ukuthatha. Njengoba i isiphuzo esigeza inhliziyo, ungakwazi oda tequila noma vodka badutshulwe. Ezinganeni kukhona ezihlukahlukene milkshakes, ayo kanye lemonade.
Ibha imi yizinsika ezintathu okuphumelela. Lokhu inyama, ubhiya newayini. Qiniseka ukuzama steaks kusukela chilled zemabula yenkomo, okuyinto wakhonza ngasiphi usayizi okukhethayo yekhasimende. Ungakhetha nezinga lokuwugazinga. Steak imenyu kunemininingwane eminingi; into ngayinye kuwo kuhambisana nezincomo kukhethwa iwayini. Uhlu olusha iwayini isibe eside okufanayo. Manje, ngaphezu French Italian and baningi Yezwe Elisha iwayini ephethe ukunambitheka obucayi ngentengo ekhangayo. By endleleni, kukhona okukhethekile ubhiya abathandi ubhiya.
Ngokuvamile, imenyu kungenziwa ngokuthi unomphela, kodwa ezihlukahlukene zalo Izipesheli.
Labo abaye wavakashela "Bar" on Bauman, oxhumana izikhungo adlulele abangane babo. Zonke ngoba uyayithanda kakhulu! Ukudla neziphuzo simnandi kakhulu, isevisi efanele futhi enembile. Kwenzeka Yiqiniso, akuwona wonke ayenjalo, abantu bezwa ubuhlungu futhi kabi, kodwa ngaphandle kwabo ndawo. Kukhona ukungaboni ngaso linye okungase uwayehlalise, kodwa wonke umuzwa omuhle. Ngesicelo amakhasimende wabuya izitsha cuisine Mexican. Izivakashi uphawu phakathi eziningi izinzuzo isikhungo Ukuphendula nangobuqotho kwabasebenzi. Kukhona ukumemeza nemigoqo ejwayelekile Russian awuthunqise amafu. Kodwa akubona bonke njengoba ngokushelela njengoba kungase kubonakale efika kuqala. Kukhona phakathi izivakashi kanye nemizwelo engemihle lomuntu. Bona ukugxeka ukudla, futhi abasebenzi mayelana amazwi ambalwa uhlobo ukusho. Ngakho, minuses eziningi yambamba inkukhu amaphiko nge sauce ashisayo ethandwa kakhulu emhlabeni. Amakhasimende bakhononda ngokuthi marinade kuyinto kunalokho ebuthakathaka, futhi wawuzwa ngokujulile nje neminyaka engu-inkukhu.
Cuisine lapha eclectic kakhulu, kodwa kukhona a baxgeki. Othile uthi ukwehluka imenyu alichaza ukuntuleka elikhuhluziwe ayo futhi zokungazimiseli ukukhuthaza umugqa abo amaphethini yokudla. Ukuze afingqe okuvelayo izivakashi, singasho ngokuphepha ukuthi le ndawo - pub ejwayelekile ngomculo okuhle futhi ibanga elikhulu besizulu. Ukuze-ke uthi cishe alikho nhlobo. Yebo, futhi ezihlukahlukene ukudla okulula, wonke umuntu angakwazi ukuthola bona, into ukwenza imali.
"I-Panorama" - yokudlela. Moscow, yokudlela "I-Panorama": Izibuyekezo
Yikuphi kungandisa ESR?
Izidlo bamboo: izakhiwo kanye nezici isicelo
Igama elifushane negama eligcwele: Zhora
Ingozi nezinzuzo irayisi - yini enye?
Esebenzisa inkulumo ezincwadini. hyperbola isingathekiso, ukuqhathanisa
Herald - ubani lo? I Abamemezeli - "okhokho" yokukhangisa yesimanje